Weeraro mideysan oo lagu qaaday dhowr magaalo oo ka tirsan Sacuudi Carabiya - Caasimada Online
Home Warar Weeraro mideysan oo lagu qaaday dhowr magaalo oo ka tirsan Sacuudi Carabiya
Weeraro mideysan oo lagu qaaday dhowr magaalo oo ka tirsan Sacuudi Carabiya
Riyadh (Caasimada Online) – Xuutiyiinta Yemen ayaa Axadda maanta weeraro isugu jira gantaallo iyo drone oodda kaga qaaday Sacuudiga kuwaas oo beegsaday goobo muhiim ah oo ay ku jiraan xarumo laga soo saaro shidaalka iyo kuwa lagu nadiifiyo, sida ay ku warrameen warbaahinta Sacuudiga.
Weerarada ma aysan sababin wax khasaare ah, balse waxay waxyeeleyeen baabuur shacab iyo guryo, ayey yiraahdeen xulufada militari ee Sacuudigu hoggaamiyo ee dagaalka Yemen.
Duqeymaha ayaa yimid ayada oo shirkadda Sacuudiga ee Aramco ay maanta ku dhowaaqday in macaashkeeda sanadkii 2021 uu sare u kacay 124%, oo uu gaaray 110 bilyan oo dollar.
Aramco ayaa warbixinteeda dakhli sii daysay toddobaadyo kadib markii uu billowday duulaanka Ruushka ee Ukraine, kaasi oo gilgilay suuqyada shidaalka ee caalamka, sarena u qaaday qiimaha.
Yehia Sarie, oo ah afhayeenka Xuutiyiinta ay Iran taageerto, ayaa sheegay inay “howlgal militari oo baaxad weyn ku qaadeen bartamaha Sacuudi Carabiya,” Axadda maanta ah, ayaga oo gantaallo ballistic ah iyo diyaarado aan duuliye laheyn oo bambooyin laga buuxiyey ku buugsaday goobo ay leedahay Aramco iyo “bartilmaameedyo kale oo xasaasi ah” oo ku yaalla dalkaas.
Waxa uu weerarka ku qeexay mid looga aargudanayey “gardarrada iyo xanibaadda” Sacuudiga uu hoggaamiyo ee ka dhanka ah Yemen.
Xulufada Sacuudiga uu hoggaamiyo ayaa sheegay in in weerarada cirka ee Xuutiyiinta lagu beegsaday goobo kala duwan, oo ka mid yihiin; warshad gaaska lagu sifeeyo oo Aramco ay ku leedahay dekadda ku teedsan Badda Cas ee Yanbu.
Waxaa sidoo kale la beegsaday xarun korontada laga dhaliyo oo ku taalla koonfurta galbeed ee dalkaas, warshad gaaska lagu nadiifiyo oo ku taalla Al-Shaqeeq oo ku teedsan Badda Cas, xarun ay Aramco ku leedahay magaalada Koonfureed ee ku taalla xuduudda ee Jizan, iyo xarun gaaska lagu iibiyo oo ku taalla magaalada Khamis Mushait.
Ma cadda weli heerka waxyeello ee weeraradan ay gaarsiiyeen xarumaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo tamarta Sacuudiga.
“Ma jiraan wax dhaawacyo ah ama dhimashooyin ah, mana jiraan saameyn ay weeraradan ku yeesheen in shirkadda ay badeecaddeeda gaarsiiso macaamiisheeda,” waxaa sidaas yiri madaxweynaha Aramco Amin H. Nasser.
Weerarada ayaa yimid maalmo kadib markii Golaha Iskaashiga Khaliijka ay dhinacyada ku dagaalamaya Yemen ku casuumeen wada-hadallo ka dhacaya Riyadh oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka – casuumaddaas oo ay ku gacan sayreen Xuutiyiinta, kuwaas oo dalbadaay in wada-hadallada ay ka dhacaan dal dhex-dhexaad ah.
AP + VOA